Niverina tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Pittsburgh ny Cathay Pacific Airways
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Niverina tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Pittsburgh ny Cathay Pacific Airways
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ao anatin'ny ezaka fampidirana ny fahafaha-manana entana fanampiny raha azo atao sy fanampiana ny fanohanana ireo rojom-pamokarana eran-tany, dia nanamboatra ny fiaramanidina Boeing 777-300ER an'ny Cathay Pacific haharaka ny fitakiana fitaterana mitombo.
Seranam-piaramanidina iraisampirenena farany hitrandrahana ny hafainganan'ny PIT.
Hanompo ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena any Pittsburgh ny mpitatitra any Hong Kong hatramin'ny faran'ny taona.
Ho tonga ny alatsinainy sy zoma ary hivoaka ny ampitso ny fiaramanidina.
Fandidiana entana ao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Pittsburgh (PIT) dia hahazo fisondrotana iray hafa amin'ny fiverenan'ny sidina indroa isan-kerinandro avy any Cathay Pacific Airways.
Cathay Pacific dia manomboka ny serivisy amin'ny 2 Aogositra 2021, miaraka amin'ny fiaramanidina mpandeha Boeing 777-300ER izay navadika ho entana, miaraka amin'ny drafitra hanompoana ny PIT hatramin'ny faran'ny taona. Ho tonga ny alatsinainy sy zoma ary hivoaka ny ampitso ny fiaramanidina. Ny entana amin'ny fiaramanidina ho an'ny indostrian'ny akanjo.
Hanomboka ny sidina avy any Hanoi, Vietnam ny fiaramanidina, mijanona ao amin'ny Terminal Cargo Cathay Pacific ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hong Kong alohan'ny sidina tsy miato mankany PIT. Ny Cathay Pacific dia nanomboka ny serivisy fitaterana entana tany PIT tamin'ny volana septambra 2020 niaraka tamin'ny sidina 20.
Ny fahafahan'ny PIT mamoaka entana haingana ary mitondra izany amin'ny kamio ho entina mandefa dia iray amin'ireo antony nisafidianan'ny Cathay Pacific sy ny mpiara-dia amin'ny seranam-barotra Unique Logistics hiverina hanao ny asa fitaterana farany ataon'izy ireo.
"Ny toerana ara-jeografika any Pittsburgh International Airport, ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina ary ny fahombiazan'ny asa dia manome tontolo iainana mety amintsika hiasa amin'ny serivisy avy any Vietnam miaraka amin'i Cathay Pacific ka hatrany amin'ny faritr'i Pittsburgh," hoy i Marc Schlossberg, filoha lefitry ny Logistics Unique Logistics. "Unique Logistics dia nifanarahana hiasa manodidina ny 120 sidina toy izany miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro avy any Azia mankany PIT sy seranam-piaramanidina hafa any Etazonia mandritra ny taona 2021, manampy ny fahafahan'ny entana entin'ny rivotra any Etazonia."
"Ny sidina fanampiny dia azo ampiana amin'ny PIT rehefa miakatra ny fandidiana," hoy i Schlossberg.